अमर्यादित भाषा असंवैधानिक - Jhilko
राजनीतिक दलहरूले एक अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप र ब्यंग्य गर्नु सामान्य नै मानिन्छ । अझ लोकतन्त्रमा असहमतिको राजनीतिलाई गहना नै मानिन्छ । तर, आजभोलि शीर्ष नेताहरू नै दुर्भावना, घृणाभाव पैदा गर्ने गरी आफ्ना विपक्षीलाई होच्याउने काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो निस्ठा, प्रवृत्ति अनुसार चलेका शक्ति, व्यक्तिलाई हेप्ने र आफूलाई श्रेष्ठता स्थापित गर्ने गरिरहेका छन् । यसले समाजलाई नै नकारात्मकता, द्वन्द्वमा लैजान सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ ।
चुनावको बेलामा नेताहरूले एक अर्काप्रति तीखो आलोचना गर्नु सामान्य नै मानिन्छ । यद्यपि यसमा पनि मर्यादाको ख्याल भने गरिनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीले जाति, धर्म र क्षेत्रीयतावादको पक्ष लिनेहरूमा पनि तीखो नकारात्मक टिप्पणी मुखरित भइरहेका छन् । विवेकहीन टिप्पणी, गालीगलौजका बौच्छार भइरहेका छन् ।
शीर्ष नेताले आफू मातहतका नेता तथा कार्यकर्तालाई संयम र शालीन भाषाको प्रयोग गर्नका लागि किन सिकाउँदैनन् ? समाजलाई उत्तेजना फैलाउने भाषाको प्रयोग किन बारम्बार गरिरहन्छन ?
गाउँघरमा रक्सी खाएर मातेर पाखा पधेरामा बोलिने ठेट गालीको भाषा र नेता तथा कार्यकर्ता र समाजका प्रतिष्ठित भनिने अगुवाको भाषामा अहिले कुनै फरक पाइदैंन । अझ यस्ता भाषाको प्रयोगमा सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन र एफएमहरूले सहयोग गरिरहेको छ ।
चाहे जुनसुकै उच्च तहमा पुगिने नेता तथा अगुवाले बोल्ने अमर्यादित भाषा असंवैधानिक हो । सत्ताको शीर्ष स्थानमा बस्ने नेताहरूबाट नै पहिला भाषालाई मर्यादित बनाउन पहल गरिनुपर्छ । भाषामा आक्रामकता, असहष्णिुताले समाजलाई नै द्वन्द्व, विघटनतिर लैजान्छ ।
समाजलाई रचनात्मक दिशामा लैजानका लागि सरकारले भन्ने गरेको शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताका लागि, समाजलाई अनुशासित, शालीन दिशामा लैजान पहल बढाउनु पर्छ । किचलो गर्ने भाषा र राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएको नेपाली समाजलाई एकीकृत र हातेमालो गर्ने स्तरमा विकास गर्नुपर्छ ।
आजबाट एसईई परीक्षा ः पौने पाँच लाख परीक्षार्थी सहभागी
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको तलब तथा सेवा...
जनावरमाथि परीक्षण भइरहेको कोरोनाबिरुद्धको खोप कहिले हुन्छ...
खोप बनेपनि यो वृद्ध मानिसहरूमा कम सफल हुनेछ। यस्तो खोपका कारणले नभई वृद्ध मानिसहरूको...
क्षतिको निरीक्षण गर्न प्रचण्ड बारा–पर्सामा, पीडितलाई पाँच...
हावाहुरीका कारण क्षतिको निरीक्षण गर्न पर्सा आइपुगेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणी...